Na-acha akwụkwọ ndụ nke Queen nke Ụbịa: nkọwa, foto, àgwà, atụmatụ nke na-eto eto - Karọt iche - 2019
Otutu carrots "Queen of autumn" nwere nkọwa na-esonụ: karọt karọ, nke nwere akwukwo rosette akwukwo na akwukwo nke ogologo oge, nke a na-ese na agba odo odo. Mkpụrụ ahụ nwere ọdịdị elongated mgbe nile, rute n'ogologo 30 cm na ịdị arọ nke 150-200 g. Ekpọrọ ihe ọkụkụ dị ka ogologo cone, ya mere karọt nwere ogologo oge kwesịrị ekwesị.
A na-acha anụ ahụ na agba omenala agba, nke dị oke, nke na-atọ ụtọ na nke dị ụtọ. O nwere ihe dị ka pasent 11 nke shuga ma ruo 17 g carotene kwa 100 g nke ngwaahịa.
Ndị na-akọ ubi na-ahọrọ ka osisi na-eto eto dị iche iche, n'ihi ya, ọ na-adọrọ mmasị ịmara ọdịdị nke carrots Nantes, Vita Long, Samson, Shantane.
Anyị na-agbanye na njirimara nke dịgasị iche iche, nke ga-enye anyị ihe ọmụma gbasara osisi ahụ.
Ebe ọ bụ na ọ na-ewe ihe dị ka 120-130 ụbọchị ịgha mkpụrụ maka owuwe ihe ubi, a na-ewere ụdị dịgasị iche n'oge. A na-eme ihe owuwe ihe ubi na mbido October.
Mkpụrụ nke dịgasị iche iche dị ezigbo mma - nke ruru 8 n'arọ site na otu square, ma ọ bụ naanị na ọnọdụ carrots na-eto eto na-eme nri. Ọ bụrụ na ọnọdụ dị njọ, mkpụrụ ga-adị gburugburu 5 n'arọ.
Carrots dị oke maka ịkwadebe ọkwá ọhụrụ, na isi nri ma ọ bụ nhazi n'ime ihe ọṅụṅụ. Ọ dịkwa mkpa ịnwe ndụ dị ogologo, bụ nke a na-echekwa njirimara na azụmahịa. Ọzọkwa, mgbọrọgwụ na-eguzogide ọgwụ.
N'okpuru ọnọdụ kwesịrị ekwesị, a ga-echekwa carrots maka ihe dịka ọnwa asatọ.
Ọ dị mkpa! A na-edebanye Carotene ka ọ bụrụ ihe mgbakwunye nri E160a.
Okwesiri ighota na "Queen of the autumn" na-ezo aka na "Carotene" ụdị dị iche iche n'ihi oke ọdịnaya nke ihe kwekọrọ na ya.
Carrots "Queen of the autumn", dị ka àgwà ndị ahụ, dị mma maka obere ugbo, na maka ịkụ mkpụrụ monoculture na ịnye ahịa.
Ọ dị mkpa iji nyochaa ike na adịghị ike nke ụdị dịgasị iche iche iji chọpụta ọnọdụ ihu igwe kacha mma maka ịkọ ihe, yana ịhọrọ ala.
a na-akpụ mkpụrụ dị iche iche;
O siri ike iwepụta ihe akwukwo nri siri ike site na nnukwu ihe.
Mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ nwere ezigbo ibu na ọdịdị a nabatara;
uto magburu onwe ya na carotene;
ọrịa na-eguzogide ọrịa.
Ị ma? Ụgbọ efere anụ ọhịa nwere agba odo odo na-acha odo odo. Oroma bụ ihe nlezianya họrọ. A na-eme ya na Netherlands, na-asọpụrụ ezinụlọ eze nke usoro eze Oran, n'ihi na epe bụ ya dynastic agba.
Carrots "Queen of the Automumn" adịghị achọsi ike na usoro nke na-eto eto, ma ka ọ dị mkpa iji mee ka ọnọdụ dị mma iji nweta nnukwu mkpụrụ. Ọzọ, anyị ga-aghọta ebe ọ bara uru ịgha mkpụrụ carrots na ụdị nlekọta dị mkpa maka ihe ọkụkụ na-akpata.
Ebe na ala. Ịkwesịrị ịhọrọ naanị ebe dị larịị. Lezie anya na ebe ahu adighi idei mmiri ma obughi ebe di ala. Ọdịdị dị elu nke mmiri ala adịghị mkpa.
Ọkụ Carrots na-eto nke ọma ma na-etolite nanị na ìhè anyanwụ kpọmkwem. Ịgha mkpụrụ na ndò ma ọ bụ ọkara ndò ga-ebibi ihe ọkụkụ ahụ na-akpata, ị ga-enwetakwa ihe ọkụkụ karịa ihe e mere atụmatụ, ya na ire ụtọ ya na àgwà ahịa ya ga-adị njọ.
Maka mkpụrụ osisi ahụ, ọ ghaghị inwe ezigbo mmiri drainage (ala ụrọ na-apụ kpamkpam) ma n'otu oge ahụ na-eme nri, ya mere ájá adịghịkwa anakwere. Nhọrọ kacha mma bụ chernozem, ma ọ bụ ala ndị nwere ezigbo mmiri drainage na otu ọmụmụ. Ma ụrọ na ájá ájá, ọbụna mgbe ịmechara "ton" nke fatịlaịza, ga-emepụta ihe ka njọ karịa nhọrọ ndị a kọwara n'elu.
Ọ dị mkpa! A pụrụ ịkpọ mmiri ọṅụṅụ karọt ezigbo "a panacea", dị ka a na-edepụtara ọ bụghị naanị na avitaminosis, kamakwa ndị ọrịa nwere ọrịa gallstone, yana ndị mmadụ nwere obi mgbawa.
Ịgha mkpụrụ dị mkpa ka ị banye na mbubreyo May, n'ime afọ iri gara aga nke September iji nakọta ngwaahịa. A na-ahọrọ nhọrọ a na elu ugwu. N'ebe ndịda ebe ndịda, a na-atụ aro ka ịgha mkpụrụ ahụ na mmalite June, ebe ọ bụ n'oge ọdịda ị ga-emesị wepụta ngwaahịa na-enweghị atụ egwu oyi na mmiri ozuzo.
A ghaghi itinye ala di omimi, nke mere na ome nwere ike igbasa n'ala.
Ihe mbụ ị ga-eme tupu ịgha mkpụrụ bụ ịgha mkpụrụ na mmiri ọkụ ruo awa 2-3, ma ọ bụghị ya, ha ga-ebili ogologo oge. Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-etinye mkpụrụ osisi na ákwà mmiri ma hapụ ka ọ zaa maka otu ụbọchị. Ozugbo osisi ahụ na-amụba n'ọtụtụ ugboro, ha nwere ike akụ. E nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi kụrụ carrots, ma anyị ga-ahọrọ oge kachasị nta.
Ebe ọ bụ na osisi dị obere, ha, maka nhịahụ nke ịkụ ihe, ọ dị mkpa ka ejikọta ya na ájá ma kụọ ihe na-esi na ya pụta. Ya mere, ị ga-enweta usoro nkịtị nke mkpụrụ ma ghara ime ka akuku kpoo. Ịkwesịrị ijikọta otu akụkụ nke mkpụrụ ahụ na akụkụ abụọ nke ájá. Nke a bụ nhọrọ kachasị mma, ebe ọ bụ na ndị ọzọ chọrọ oge buru ibu (dịka ọmụmaatụ, ịrapara na mpempe akwụkwọ mposi).
Ị ma? Ke akpa ini carotene kewapụrụ si carrots. A na - akpọ aha a n'azụ ya: na Latin carrots - "carota".
Ugbu a, ka anyị kwuo banyere otu esi akwadebe atụmatụ maka ịgha mkpụrụ.
Ọ dị anyị mkpa igwu ebe ahụ a họọrọ ma jiri nlezianya na-aga ije na-agbaji ara nile nke ụwa. Ọ bụrụ na ịmeghị nke a, ị ga-enweta akwụkwọ, "mkpụrụ ụkwụ abụọ" bụ ndị ga-enwe ụdị adịghị mma maka ire ere.
Mgbe nke a gasịrị, anyị na-eji okpukpu 1 na-eme ka uzo dị omimi, tinye ha na mmiri ma na-agha mkpụrụ. N'otu oge ahụ, buru n'uche na anya dị n'agbata oghere ga-abụ na ọ dịkarịa 15 cm, ma ọ bụghị na ọ ga-esi nnọọ ike ilekọta carrots, ọ ga-adịkwa ka ọ gaghị ekwe omume iwepu ahịhịa n'enweghị nsogbu nye osisi ahụ. Ozugbo ịgha mkpụrụ, a na-etinye ala dị ntakịrị na, ma ọ bụrụ na mkpụrụ ahụ dị akọrọ, ọ na-agbakwụnyekwa ya na obere mmiri.
Nkwado na ezi ugbo na-eme ọ bụghị nanị na-eme ka mkpụrụ ahụ bawanye, kama ọ na-ebelata ohere nke ọrịa na pests ga-emetụta.
Ọ dị oke mkpa ilekọta carrots n'oge mbụ, ma ọ bụghị ihe ọkụkụ ahụ ga-eto eto ma mebie.
Malite na germination na ruo mgbe ọdịdị nke ezi mbụ akwụkwọ ahụ, mkpụrụ ahụ ga-abụ mmiri mgbe nile, ruo n'ókè na n'ụbọchị pụrụ iche pụrụ iche, a na-etinye sprinklers pụrụ iche n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Ọ dị mkpa! Ịgbara kwesịrị ịdị nfe. Site na otutu mmiri nke karọt karọt.
Ozugbo ezigbo epupụta pụtara, a pụrụ ibelata mmiri. Ọ bụrụ na ihu igwe dị akọrọ, mgbe ahụ otu izu iji wụsa akwa dị ihe dị ka ugboro 3-4, ọ dịghịkwa. Ọ bụrụ na mmiri zoo, ọ bụ ezie na ọ bụghị ike, ọ ka mma ịjụ ịgbara. N'agbanyeghị otú ị si akụ mkpụrụ carrots, ọ ka dị mkpa ka ị gbanye ya, ma ọ bụghị ihe mgbọrọgwụ niile ga-adị ntakịrị, ma mkpụrụ zuru ezu ga-ada ọtụtụ ugboro. A na-ebugharị nke mbụ na ntanetị nke ezi akwụkwọ abụọ, mgbe ahụ - mgbe karọt dị oke ka pensụl.
A ga - enwe ọdịiche nke 3 cm n'etiti ndị agbata obi na - akpachara anya mgbe nke mbụ gasịrị, nke kwesịrị icheta. Mgbe nke abụọ na - emegharị - ọbụlagodi 5 cm.
Lezienụ anya n'eziokwu ahụ bụ na mgbe osisi ndị na-eme mkpagharị dị mkpa ka mmiri.
Ekwesiri ilebara anya nke oma iji gbochie ihe omume pests - nematodes, slugs, bea, carrots, wireworms, aphids, moles, shrews, mkpuru oke oke, oke.
Banyere dressings: "Queen of autumn" na-eri naanị "mmiri ịnweta", ọ dịghị mkpa iji tinye humus ma ọ bụ compost. Ụbọchị 5 mgbe nke ọ bụla gasịrị, dina nitroammofoska n'elu akwa ma wụsa mmiri zuru ezu.
Iji mechaa isiokwu a, anyị ga-abụ ihe ubi kwesịrị ekwesị.
Ihe mbụ ị ga - ekwu - agbala ọsọ iji dọpụ "Queen of the autumn" site n'ala. Ọ bụghị ihe ijuanya na anyị dere na na ihu igwe dị ọkụ karị, a na-emecha nchịkọta ahụ. Nke bụ eziokwu bụ na n'oge ị na-ewepu carrots si n'ala, ọ ga-echekwa ya. N'ezie, ọ bụrụ na ị kwenyesiri ike na mmiri ozuzo ga-abụ "ebubo" n'oge na-adịghị anya, mgbe ahụ, ọ ka mma ịgha mkpụrụ ihe ubi ahụ n'oge gara aga, ma ọ ka bara uru ịṅa ntị na oge mmezu nke 120-130 ụbọchị.
Ọ dị mkpa! Nchịkọta karọt dum na-eme ka mmetụta ọgwụ ọjọọ nke ọgwụ nje mee ka ọ ghara imebi, ma mezie usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, bụ nke na-eme ka ụba na-eguzogide oyi.
Owuwe ihe ubi kwesiri ikpo na ihu igwe. Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ime nke a, a ga-ehichasị mgbọrọgwụ nke unyi ma gụchaa. Akụkụ a dị ukwuu na-emetụta ọdịdị ngwaahịa ahụ n'ọdịnihu.
Ozugbo e gwuru carrots, a na-ahazi ha, wepụ ihe ndị mebiri emebi ma ọ bụ mebie akwụkwọ nri. Akwukwo akwukwo ajuju ajuju na oge kachasi ohere kwere maka nhazi ma obu bu ihe.
Enwere nchekwa ọzọ na oke iru mmiri na okpomọkụ nke 0-2 Celus. Ọ bụ n'ọnọdụ dị otú ahụ na ngwaahịa ndị echekwara kachasị.
Ugbu a, ị maara ihe ụdị karọt dị, nke mere ka ọ bara uru ma maka ojiji nkeonwe na maka ire ere. Soro ntụziaka anyị ma gbalịa ịnyagharịa dịka ọnọdụ ihu igwe, ka carrots wee na-eto na nkasi obi kachasị mma. Ejila nri a na-eme nri maka fatịlaịza ma gbalịa ka ị ghara itinye organic fatịlaịza na usoro mmepe iji chebe ọdịdị nke ihe ọkụkụ ahụ.
Enwere m ike iri nsen goose maka nri: olee uru na uru ha bara
Atụmatụ na-elekọta mkpụrụ vaịn site na mmiri ruo n'oge mgbụsị akwụkwọ
Ihe dị iche n'etiti anise na anise
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Queen nke mgbụsị akwụkwọ: atụmatụ nke karọt iche